ယနေ့ထွက်ရှိမဲ့ အရေးကြီး Data တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Purchasing Managers’ Index(PMI) အကြောင်း – King Of Future
ယနေ့ထွက်ရှိမဲ့ အရေးကြီး Data တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Purchasing Managers’ Index(PMI) အကြောင်း
LeaveaComment	/ Uncategorized / By codexmyanmar
☘️ Purchasing Managers’ Index (PMI) သည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဌများရှိ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများ၏ လက်ရှိဦးတည်ရဲ့ အညွှန်းကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းမှာ ဝယ်လိုအားကို မန်နေဂျာများ ရှုမြင်သည့်အတိုင်း ဈေးကွက်အခြေအနေများ ချဲ့ထွင်နေခြင်း၊ အတူတူရှိနေခြင်း (သို့) စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း ရှိ မရှိ အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြသည့် ပျံနှံ့မှု အညွှန်းကိန်းတစ်ခု ပါရှိပါသည်။PMI ကို Institute for Supply Management (ISM) မှ လစဉ် ပြုစုပြီး ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ PMI သည် U.S GDP သို့ ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် တွက်ဆထားသော ပင်မစက်မှုလုပ်ငန်း 19ခုရှိ ကုမ္ပဏီ 400ကျော်မှ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများထံ လစဉ်ပေးပို့သော စစ်တမ်းအပေါ် အခြေခံထားပါတယ်။ PMI သည် အမှာစာအသစ်များ၊ သိုလှောင်မှုအဆင့်၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပေးသွင်းသူများ ပို့ဆောင်ခြင်း နှင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိမှုတို့ အပေါ် အခြေခံထားပါတယ်။ ISM သည် ဤစစ်တမ်း၏ နယ်ပယ်တစ်ခုစီကို အညီအမျှ တိုင်းတာပါတယ်။ စစ်တမ်းများတွင် လုပ်ငန်းအခြေအနေများ တိုးတက်မှုရှိမရှိ၊ အပြောင်းအလဲ ရှိမရှိ စသည့် မေးခွန်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
☘️ PMI ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများ၊ လေ့လာသုံးသပ်သူများ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ထံသို့ လက်ရှိ နှင့် အနာဂတ်စီးပွားရေးအခြေအနေများအကြောင်း အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
☘️ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် စီးပွားရေးအခြေအနေများ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သော PMI ကို ၎င်းတို့၏ အားသာချက်အဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။PMIလမ်းကြောင်းသစ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ GDP၊ စက်မှုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု နှင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု ကဲ့သို့သော စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်မှု နှင့် ထုတ်လုပ်မှု၏ အဓိကခန့်မှန်းချက်မှာ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ PMI ရှိ တန်ဖိုး နှင့် ရွေ့လျားမှုများကို အာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းဟာ စီးပွားရေးတစ်ခုလုံး၏ အလားအလာများ ဖြစ်ထွန်းလာခြင်း နှင့် အနာဂတ်မှာ အမြတ်အစွန်း များကို ရရှိစေရန် အထောက်အကူ ပေးပါတယ်။
🕓 ယနေ့ ညနေ မြန်မာစံတော်ချိန် (4:00) အချိန်မှာ PMI နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Data (Composite,Manufacturing, Services) တွေ ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိနေပြီး Market ကို ဘယ်လောက်ထိ ရိုက်ခတ်မှု ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Free Channel for Education
အောက်ပါရုံးဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်…
☎️ Phone No. : 09777456758
GBP/USD Intraday: key resistance at 1.2975.(24.12.2019)
57 Comments	/ Uncategorized / By codexmyanmar
Phone: +959 777 456 758